CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Milina famolavolana elektrika feno - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Masinina famolavolana herinaratra feno
Fotoana: 2018-04-24 Hits:
Suzhou Jwell Plastic Machinary Co., Ltd dia hampiseho milina fanamboarana jWZ-EBM-850S mivelatra amin'ny jiro mahery vaika @ 8.1D85. Manantena ny fitsidihanao.
Ny tsipika famokarana dia afaka mamaly ny fepetra takiana amin'ny fahadiovan'ny milina sy vokatra amin'ny indostrian'ny sakafo, ny fitsaboana, ny fanafody ary ny fahadiovana. Raha ampitahaina amin'ny milina famolavolana lozisialy hydraulic, ny milina famolavolana herinaratra manerantany dia mitondra fiara fitaterana servo feno, ny angovo dia manodidina ny 30%, tsy misy famoahana solika, tabataba ambany, mitazona ny atrikasa ho madio sy madio; Ny fiasan'ny fitaovana dia azo antoka kokoa, avo lenta kokoa, fametrahana toerana Marina kokoa, haingana ary mahomby kokoa.
1 、 (Platen mihetsiketsika 850mm, toby tokana, iray ka hatramin'ny 170mm afovoany afovoany) bobongolo fitaovana plastika, fivoahana, fivezivezena sy fikolokoloana ary fofona no entin'ny motera servo avo lenta, manolo tanteraka ny teknolojia fampandehanana Hydro nentim-paharazana, angovo bebe kokoa famonjena sy fiarovana ny tontolo iainana.
2, ny rafitra drive servo sy ny rafitra PC an'ny indostrialy dia samy mampiasa ny vokatra avo lenta an'ny B & R hamaly tanteraka ny fepetra takian'ny mpanjifa avo indrindra amin'ny fitsofana fitaovana.
3, Platen mihetsiketsika & clamping mampiasa maotera servo feno, miara-miasa amin'ny crankshaft sy mampifandray tsorakazo rafitra, optimizing miolakolaka mihetsika amin'ny alàlan'ny teknolojia matihanina, avy eo miakatra haingana sy miasa miovaova.
HIVERINATatitra avy amin'ny Chinaplas 2018 sy Suzhou Jwell andro misokatra
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika fantsom-pandrefesana fantsom-panafody PE matevina.